Ala Wetland: kedu ihe ha bụ, njirimara, ihe dị iche iche dị mkpa na ịdị mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ihe ndị sitere n'okike na-emetụta ihe dị iche iche dị ndụ dị iche iche, bụ ala mmiri. Ebumnuche kwa afọ bụ ime ka ndị mmadụ mara mkpa ọ dị ichekwa usoro okike ndị a dị oke ọnụ. Ya mere, ụbọchị Febụwarị abụọ nke afọ ọ bụla bụ ụbọchị Wetland World. Ala udu mmiri bu ihe anumanu nke ala na-ekpuchi ma obu mmiri nke ala na-eme kwa oge. Nke a nwere ike ime na gburugburu ebe obibi mmiri dị mma na mpaghara ụfọdụ nwere oke nnu nnu.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ ala mmiri, gịnị bụ njirimara ha bụ isi na etu ha si dị mkpa.
1 Gịnị bụ a Wetland
2 Ofdị mmiri mmiri
4 Ihe omumu nke ala mmiri
Gịnị bụ a Wetland
Ọ bụ ihe okike ebumpụta ụwa, nke nwere usoro obibi nke ụlọ, na-adabere na ala mgbe niile ma ọ bụ na-adịgide adịgide idei mmiri. Usoro ihe omumu a nwere ike iputa ebe mmiri di nma ma obu ebe mmiri nnu di. N'ihi njirimara ndị a, mmiri mmiri nwere ike na-ejigide ọtụtụ ụdị dị iche iche dị na mbara igwe ma na-enye akụ na ụba sitere na ụdị ihe dị iche iche na-enweghị atụ.
Wbọchị Wetland World Wes na-ekwusi ike mkpa mmiri mmiri dị n'ihi na ha dị mkpa maka ndụ anyị ga-adigide n'ọdịnihu. Ala mmiri nwere ike ịbụ ihe okike ma ọ bụ nke mmadụ mere. Typesfọdụ ụdị mmiri mmiri dị iche iche nwere ike ịgbasa n'ime swamps, ụfọdụ apịtị na mpaghara mmiri ha, ala ahịhịa, wdg. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịhụ ebe mmiri mmiri mepụtara ma ọ bụ gbanwee. Mgbe obula onodu gburugburu ebe obibi kwere, nwere ike iji aka chebe mmiri ruo nwa oge ma na-adịgide adịgide.
Na mkpokọta, ụdị mmiri a wuru mmiri wuru iji chebe ụdị dị iche iche nke ihe egwu dị na mbibi. A na-ejikwa ya maka ebumnuche ndị njem iji nye ọrụ gburugburu ebe obibi ma nyere aka gbasaa uru nke nchedo okike.
Ofdị mmiri mmiri
N'ihi na mmiri mmiri ndị a bara ọgaranya, ha abụrụla ngwaọrụ dị mkpa maka ichekwa okike. E nwere ụdị mmiri mmiri dị iche iche, a na-ekewa ha dịka ụdị mmiri na-eme ha na njirimara ndị ọzọ anyị ga-eso. Isi ihe dị iche na ụdị ụdị mmiri mmiri bụ ụdị mmiri. Anyị na-achọpụta mmiri ahịhịa mmiri na mmiri mmiri nnu. Anyị nwekwara ike ịmata ọdịiche dị n’etiti ahịhịa mmiri na agwa mmiri nke mmadụ mere.
Ka anyị hụ ihe ụdị mmiri mmiri dị iche iche bụ:
Osimiri mmiri: O bu ala mmiri nke nwere udiri agwa na udiri mmiri ohuru. Ha na-abụkarị osimiri, iyi, na nsụda mmiri.
Ọdọ mmiri: A na-etolite ha site na ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ọdọ mmiri ụfọdụ.
Osimiri Tropical: Gụnyere mpaghara nwere obere isi mmiri, ala ahịhịa, ala udu mmiri, oke ọhịa apịtị, swamps, na bogs. Udi njiri mara udiri ala a bu na ha nile nwere ihe sitere na ala na mmiri ya.
Mmiri mmiri mmiri: Dị ka aha ahụ na-egosi, ha bụ ala mmiri mmiri, mana ha nwere mmiri nnu. Ha na-apụtakarị na gburugburu ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri ebe mmiri na-emighị emi, dị ka ụfọdụ okwute, ụsọ mmiri aja na ụfọdụ okwute.
Wuru: Ndi mmiri mmiri a sitere na oru ndi mmadu site na ebumnuche nke ichekwa ma obu ichikota oke mmiri. N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ọdọ mmiri na dams. Ha nwekwara ike buru ebum n’uche ichekwa ụfọdụ ụdị osisi na ahịhịa na anụmanụ.
Ihe ọmụmụ: ọtụtụ osimiri na-etolite etu tupu ha ejedebe ọnụ ha na ụfọdụ mmiri mmiri. Ihe njiri mara ha bu na ha nwere mmiri nnu site na estuaries ma obu sitere n'okike. Mgbe ụfọdụ ọ na-enwe ike ịmepụta mmiri mmiri nnu ma ọ bụ ebe mangrove.
Saltwater ọdọ mmiri: Ọ dị ka nke ndị bu ya ụzọ, mana ọdọ mmiri ahụ na ọdọ mmiri ahụ dị nzuzu dịka a na-ahụ ha na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri. Ha nwekwara sitere n'okike.
Ka e were lelee usoro okike nke mmiri, ọ ga-enwerịrị njirimara ndị a:
Na-atụle mpaghara mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe nwayọ nwayọ n'etiti sistemu mmiri na ala. Nke ahụ bụ, a na-ahụta ha dị ka igwe agwakọta agwakọta n'ihi na ha na-echekwa ụfọdụ njirimara nke otu usoro okike na nke ọzọ. Anyị chọpụtara na akụkụ ụfọdụ na-elekwasịkarị anya na ihe ndị dị ndụ na mbara ala, ebe ndị ọzọ na-elekwasị anya na ihe ndị dị ndụ.
Ha bụ mpaghara idei mmiri, yabụ ha nwere ike ịbụ mpaghara na-adịru nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Oge na-adịru nwa oge na-apụta n’ebe nwere obere nkụda mmụọ, nke na-asọ mmiri n’ụzọ dị mfe mgbe mmiri zoo.
Mmiri Wetland kwesịrị ịbụ mmiri na-ada ada, obere iyi, mmiri dị mma ma ọ bụ mmiri nnu, ma tinye obere mpaghara oke osimiri nwere oke omimi. Mmetụta mmiri nke mmiri mmiri dị ala. Ọtụtụ mgbe mmetụta a agaghị agafe mita 6.
A ga-ekpebi oke ala mmiri site n'ụdị ahịhịa dị na mpaghara ọ bụla. Ahịhịa bụ hydrophilic, ya bụ, ọ chọrọ ezigbo ọchịchọ mmiri. Enwekwara ike ịmata ọdịiche dị n’etiti ahịhịa na-abụghị hydrophilic na ahịhịa nke na-anọchite anya oke ala mmiri, ebe usoro ndụ ọzọ dị na njedebe wee bido na gburugburu ụwa kpamkpam.
Ala Wetland bụ ebe dị mma maka ọtụtụ ụdị ụdịọkachasị nnụnụ ndị na-aga mba ọzọ na-eri nri ma zuru ike na mmiri mmiri gburugburu ụwa. Anyị nwekwara ike ịchọta osisi na anụmanụ dịka anụmanụ, anụ na-akpụ akpụ, amphibians, azụ na ụmụ ahụhụ.
Ihe omumu nke ala mmiri
Ala mmiri bụ usoro okike dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ nke okike. Ha nwere ikike iburu ihe di iche-iche nke otutu nnunu, azu na umu anumanu ndi ozo. Ha na arụkwa osisi puru n’elu mmiri.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye ụwa mmadụ, oke mmiri nwere ike ịmepụta mpaghara maka mmepụta nri ma chọọ nnukwu mmiri ka ha too, dịka osikapa. Ihe ndị ọzọ dị oke mkpa iji chekwa iru mmiri bụ iwu nke mmiri mmiri, gụnyere elu na aquifers. Ọ na-arụsi ọrụ ike na njikwa mbuze na usoro nke usoro nri.
Maka nke a, imirikiti mmiri mmiri nwere usoro nchedo e lere anya dị ka ebe nchekwa ihe. Na nke a na ike udi nke nchedo ọchịchị oru aku na uba amachi na nyocha na ọnụ ụzọ ndị njem nleta na-achịkwa. Emere ihe a niile iji chekwaa ụdị mmiri dị iche iche.
Enwere m olile anya na ị nwere ike ịmatakwu ihe ala mmiri dị na ihe bụ mkpa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ala Wetland